Shoko RaMwari Rinoshandura Mavonero Aunoita Zvinhu
"Musaenzaniswa nenyika ino; asi mushandurwe murangariro wenyu uchivandudzwa, kuti muidze muzive kuda kwaMwari kwakanaka, kunofadza, kwakakwana" (VaRoma 12:2).
Munhu ane mafungiro aanoita. Zvekare, ane mavonero aanoita zvinhu. Zviviri izvi zvakasiyana. Mumwe nemumwe ane manzwisisiro aanoita zvinhu. Ane mavonero aanoita zvinhu. Mavonero aya ndiwo anomupa mafungiro ake. Ndiwo anomutuma kuita zvaanoita.
Mavonero aya haauyi oga. Ane zvinhu zvinoaumba. Zvinhu izvi ndizvo zvakakosha. Shoko raMwari ndiro rinofanira kuumba mavonero aunoita zvinhu. Zvisizvo, hupenyu hahukufambiri zvakanaka. Saka unofanira kudzidza Shoko raMwari. Unofanira kugara uchirifungisisa. Unofanira kugara uchiridzeya. Ndiro rinofanira kugara riri mupfungwa dzako. Unozotanga kuvona zvinhu nenzira itsva. Mavonero aya ndiwo anoita vanhu vakarurama.
Mavonero akadai hachisi chipo. Chinhu chaunotoshandira. Haungonamati uchiti, "Ndinogamuchira mavonero akanaka aya". Kwete. Unotofanira kugara pfungwa dzako dziri paShoko raMwari. Shoko iri rinofanira kugara riri mupfungwa dzako. Rinofanira kugaramo rakazara. Mafungiro ako anozoshanduka. Unenge wava kuvona zvinhu nenzira itsva. Unenge wava kuzvivona nenzira yakanaka. Kuda waimbosizvivona semunhu anogara achikurirwa. Unozotanga kuzvivona semunhu anokurira. Kuda waizvivona semurombo. Unozotanga kuzvivona semufumi. Kuda waizvivona semurwere. Unozotanga kuzvivona semutano. Unenge wava kufunga saMwari. Saka unenge wava nerudo. Unenge wava kuzvivona semukundi. Unenge wava nerutendo. Unenge wava kuzvivona semunhu anotonga. Unenge wava kuzvivona semutano. Unenge wava kuzvivona semunhu ane simba. Hareruya!
Baba vandinoda. Ndinokutendai. Shoko renyu rine mavonero arakandipa. Aya mavonero anoita vanhu vakarurama. Mazano angu ava kubva muShoko renyu. Ndiro rinondijekesera zvinhu. Ndinofungisisa Shoko iri. Nokudaro, pfungwa dzangu dzinoshandurwa. Dzinofunga nomazvo. Dzinoita zvinhu nomazvo. Dzinonzwisisa zvinhu zvakajeka. Muzita raJesu. Ameni.